Blockfolio - Bitcoin and Cryptocurrency Tracker 2.4.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.4.0 လြန္ခဲ့ေသာ4မိနစ္က
Application မ်ား ေငြေရးေၾကးေရး Blockfolio - Bitcoin and Cryptocurrency Tracker
Blockfolio - Bitcoin and Cryptocurrency Tracker ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Blockfolio 8,000+ ထိပ်တန်း cryptocurrencies များအတွက်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးအခမဲ့ Bitcoin & cryptocurrency အစုစု tracker တွင် App ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသူများကိုသန်းပေါင်းများစွာ join နှင့်တစ်နေရာတည်း၌သင်တို့၏တစ်ခုလုံးကို crypto အစုစုကိုခြေရာခံ, အသေးစိတ် crypto စျေးနှုန်းနှင့်စျေးကွက်သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်နှင့် crypto အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်မွမ်းမံမှုများလက်ခံရရှိသည်။ Bitcoin စျေးနှုန်းခြေရာခံခြင်းဒီ crypto ခြေရာခံခြင်း app ကိုအတူလွယ်ကူသောဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
CRYPTOCURRENCY အစုစုကို Track
8000 ကျော်ကထိပ်တန်း crypto ဒင်္ဂါးပြား, altcoins & တိုကင်၏■ Track crypto စျေးနှုန်းများ (Bitcoin ငွေ, Bitcoin ရွှေ, Bitcoin စိန်, Binance အကြွေစေ့, Litecoin, Ethereum Classic, ဂယက်ထ, Cardano, Monero Classic, Monero မူရင်း, ReddCoin, Siacoin, Augur, Zcash, DigiByte, OmiseGO, TenX, MonaCoin, Dogecoin, EOS, MIOTA, XVG, ZRX & အများအပြားကပို) ။
■ 100+ Fiat ငွေကြေး (အမေရိကန်ဒေါ်လာ, EUR, JPY, ပေါင်, BRL, ဝမ် & ပိုပြီး) သို့မဟုတ် crypto အခြေစိုက်စခန်း (BTC, ETH, XRP, BNB, Neo, USDT, PAX, USDC, & ပိုပြီး) တွင်သင်၏အစုစုကိုကြည့်ရှုပါ။
■သင့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအစုစုကိုဂရပ်နှင့်အတူအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသင့်ရဲ့ crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏လမ်းကြောင်းသစ်မှ CHART ။
တိုက်ရိုက် BLOCKFOLIO SIGNAL နဲ့ Crypto အဖွဲ့ထံမှသီးသန့် UPDATE
■အဆိုပါ crypto အာကာသအတွင်းလူအပေါင်းတို့သည်သတင်းမှားမှတဆင့် Cut နှငျ့သငျ (Monero, Ontology, VeChain, Nano, Bytecoin, Lisk, etc) ဂရုစိုက်သည့် crypto ဒင်္ဂါးပြား၏ခေါင်းဆောင်မှုသင်းမှတိုက်ရိုက်ပြတိုက်မှူးအချက်ပြမှုများကိုလက်ခံရရှိသည်။
တိုက်ရိုက် EXCHANGE Price & စျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
300+ crypto ဖလှယ်မှု (Coinbase Pro ကို, Binance, Kraken, Bittrex, CryptoGo, Cryptopia, KuCoin, Poloniex, Bitstamp, GXChain, HitBTC, Bitfinex, Paxful, EtherDelta, BitMEX, YoBit, Bithumb, Coinmama, Huobi, စတာတွေနဲ့အတူဂလိုဘယ်လွှမ်းခြုံ■ )
တိုင်း crypto အကြွေစေ့ကိုကြည့်ရန် crypto ခုံဇယားနဲ့ Real-time အလို့ငှာစာအုပ်သတင်းအချက်အလက်■။ တိုက်ရိုက်လွှ crypto ဇယားတွေနဲ့ altcoin စျေးနှုန်းတွေကိုနှိုင်းယှဉ်။
■စျေးနှုန်းများရွှေ့သည့်အခါချက်ချင်းအကြောင်းကြားဖို့ထုံးစံ crypto စျေးနှုန်းသတိပေးချက်များသတ်မှတ်မည်။ သငျသညျအကွောငျးကိုဂရုမစိုက်သည့် cryptocurrency နှုန်းထားများနှင့် ပတ်သက်. အသိပေး Get ။
■ CoinDesk, အကြွေစေ့ကြေးနန်းနှင့်သင့်ထုံးစံ cryptocurrency news feed မှာပိုအနေဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ် crypto သတင်းနှင့်အတူကို up-to-date ဖြစ်အောင်နေပါ။ သငျသညျ Bitcoin နှင့်အခြား altcoins ပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်ရှေ့တော်၌ထိုနောက်ဆုံးပေါ် Bitcoin ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့် altcoin ခေတ်ရေစီးကြောင်းအကြောင်းကိုဖတ်ပါ။
သင်တစ်ဦးဝယ်ယူဝင်မရှိဘဲသင်၏ crypto AirDrop နှင့် cryptocurrency သတ္တုတူးဖော်ရေးဆုလာဘ်များအတွက်အကောင့်သို့မဟုတ်စံချိန်ရောင်းချမည်နိုင်ပါတယ် Now ကို■။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်ကအရောင်းအဝယ် tab ကိုအတူကူးလူးဖလှယ်မှုနှင့် cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်အကြားတိုကင်ရွှေ့ပါ။
အသုံးပြုသူများသည်သန်းနှင့်ချီတကမ္ဘာလုံး Blockfolio ကိုချစ်:
"လွယ်ကူစွာကိုအကောင်းဆုံး cryptocurrency စောင့်ကြည့်ရေး app ကိုတို့နှင့်ကြီးသောဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုရှိပါတယ်။ " ■
■ "function ၏5ကြယ်ပွ ... တိကျမှန်ကန်စျေးနှုန်း, အရင်ကဆိုရင်များအတွက်လွယ်ကူသော, ကြော်ငြာအခမဲ့, ပဒေသာကောင်းပြီတန်ဖိုးရှိအလွန် ... အကြံပြု"
■သင့်ရဲ့ crypto အစုစုကိုကာကှယျစောငျ့ရှောကျဖို့ PIN ကိုသော့ခတ်ထည့်ပါ။
■ဆက်ပြောသည် privacy ကိုများအတွက် "Hide Balance" အင်္ဂါရပ်၏အားသာချက်ကိုယူပါ။
■ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 24/7 ထောက်ခံမှုအသင်းနှင့်သင်၏ crypto အစုစုကို Recover သို့မဟုတ်လွှဲပြောင်း။
■သင်ဟာအချိန်မရွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြေးနန်းပေါ်တွင်သို့မဟုတ် support@blockfolio.com အီးမေးလ်ပို့ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
■ ကြေးနန်း : telegram.blockfolio.com
■ နဲ့ Twitter : twitter.com/Blockfolio
■ Facebook ကို : facebook.com/Blockfolio
■ Instagram ကို : instagram.com/Blockfolio
■ ဘလော့ : blog.blockfolio.com
■ တုံ့ပြန်ချက် : feedback.blockfolio.com
■ အီးမေး : support@blockfolio.com
Blockfolio - Bitcoin and Cryptocurrency Tracker အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Blockfolio - Bitcoin and Cryptocurrency Tracker အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Blockfolio - Bitcoin and Cryptocurrency Tracker အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Blockfolio - Bitcoin and Cryptocurrency Tracker အား အခ်က္ျပပါ
bayt-apps စတိုး 1.61k 383.33k
Blockfolio - Bitcoin and Cryptocurrency Tracker ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Blockfolio - Bitcoin and Cryptocurrency Tracker အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Blockfolio, LLC
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://blockfolio.com/legal/index.html#pp
App Name: Blockfolio - Bitcoin and Cryptocurrency Tracker
Release date: 2019-06-19 18:37:08
လက်မှတ် SHA1: 9E:A5:84:EB:2D:82:B6:1D:78:EF:88:5A:53:45:36:21:39:41:17:4D
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Peter Lau
အဖွဲ့အစည်း (O): Blockfolio
Blockfolio - Bitcoin and Cryptocurrency Tracker APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ